Shop Anniversary ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေမှာ ဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲ? - Shop
Shop Anniversary ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေမှာ ဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲ?0319
Shop Anniversary မှာဆိုရင် အစီအစဉ်ကောင်းများစွာပါဝင်ပြီး ဒီအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ နဲ့ ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Shake Shake အစီအစဉ်ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၉၊ ၁၁၊ ၁၃ နှင့် ၁၅ ရက်တို့တွင် ညနေ ၆ မှ ၉ နာရီအတွင်း ဖုန်းလေးကို Shake ရုံနဲ့ အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ တန် ကူပွန်ကုဒ်တွေကံစမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Shake Shake အစီအစဉ်မှာပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Shop App သို့ဝင်ပါ။
Shop App Home Screen ရှိ Shake Now လေးကို နှိပ်ပါ။
ဖုန်းလေးကိုလှုပ်ခါပေးပါ။‌‌‌ပြီးနောက်ရရှိလာတဲ့ ဆုများဖြင့် ‌Sale ကာလအတွင်းလျှော့စျေးများရယူနိုင်ပါပြီ။
Shake Shake ကိုမကစားမှီ Shop App ကို Download ပြုလုပ်ထားဖို့လိုပါမယ်။
ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ Shop App ကို အောက်တိုဘာလ ၉ မှ ၁၆ ရက်နေ့အတွင်း Shop App ကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေများထံသို့ မျှဝေပြီး အများဆုံး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်အထိ ကံစမ်းရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Shop App သို့မဟုတ် Shop Web ရှိ Refer and win ထဲသို့ဝင်ပါ။ Refer လုပ်ဖို့အတွက် Link ရရှိရန် သက်မှတ်ထားသောနေရာတွင် သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ Link ရရှိပါက ထို Link အားကူးယူ၍ သူငယ်ချင်းများသို့မျှဝေပါ။
Partner Brand Voucher
Brand Voucher(Partner) အစီအစဉ်းမှာတော့ အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့မှ ၁၆ရက်နေ့အတွင်း သက်မှတ်ထားတဲ့ Brand ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့အခါ Checkout တွင် လျှော့ဈေးကူပွန်ကုဒ်များကို အသုံးပြုပြီး ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လျှော့ဈေးကူပွန်ကုဒ်တွေကတော့
အနည်းဆုံး ၁၂,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူပြီး ၂,၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေးအတွက်အသုံးပြုရန် ကူပွန်ကုဒ် > > WALPYIT2K
အနည်းဆုံး ၆၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူပြီး ၁၀,၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေးအတွက်အသုံးပြုရန် ကူပွန်ကုဒ် > > WALPYIT10K
အနည်းဆုံး ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးဝယ်ယူပြီး ၅၀,၀၀၀ ကျပ်လျှော့ဈေးအတွက်အသုံးပြုရန် ကူပွန်ကုဒ် > > WALPYIT50K
ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ကူပွန်ကုဒ်များကို Checkout တွင်အသုံးပြုပြီး ထပ်ဆောင်းလျှော့ဈေးတွေကို အောက်တိုဘာလ ၁၂ရက်နေ့ မှ ၁၆ ရက်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် မြန်မြန်ဝယ်ယူဖို့တော့လိုပါတယ်။
Happy Hour အစီအစဉ်မှာဆိုရင် အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့နှင့် ၁၆ရက်နေ့ တို့တွင် ညနေ ၄နာရီမှ ၆နာရီအတွင်း အနည်းဆုံး ၁၀,၀၀၀ကျပ် နှင့်အထက်ဝယ်သူတွေအတွက် သက်မှတ်ထားသော မြို့နယ်များသို့ ပို့ဆောင်ခ အခမဲ့ (အများဆုံး ၂,၅၀၀ ကျပ်) လျှော့ဈေးဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် အခြားအစီအစဉ်ကောင်းများစွာလည်း ပါဝင်လာဦးမှာပါ။
Previous ArticleStay-Home ကာလမှာ အထောက်ကူဖြစ်စေမည့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများNext Articleကျောင်းသုံး လက်တော့ပ်တွေဝယ်ယူတော့မယ်ဆို သိထားသင့်တဲ့အချက်များ